Akhriso Bayaan Ay Soo Saareen Xildhibaanadii Dhex Dhexaadinta U Tagay Cadaado. – Hornafrik Media Network
Akhriso Bayaan Ay Soo Saareen Xildhibaanadii Dhex Dhexaadinta U Tagay Cadaado.
Bayaan ay soo saareen Guddigii Dhex Dhexaadinta ka dhex waday Dhinacyadda isku haya Galmudug ayeey ku sheegeen inay soo wajaheen Caqabado si loo sii ambi qaado Wahadaladda.
Halkan Ka Akhriso Bayaanka Guddiga Dhex Dhexaadinta ah .
1. Wafdi ka kooban Xildhibaanada labada Gole ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, kuwaasoo deegaan doorashadoodu tahay Dowlad Goboleedka Galmudug, waxey booqasho howleed ku yimaadeen caasimada ku meelgaarka ah ee Cadaado 27 September 2017, safarkaas oo ujeedadiisu ahayd xal u helida ismaandhaafka soo kala dhex
2. Wafdiga Xildhibaanadu waxey kulamo gaar gaar ah la qaateen Madaxweynaha Galmudug, Madaxweyne ku-xigeenka, Gudoomiyaha Barlamaanka iyo labada ku-xigeen.
3. Sidoo kale Xildhibaanadu waxey kulamo gaar ah la yeesheen odoyaasha dhaqanka Galmudug iyo qeybaha kale ee bulshada, kuwaasoo dareen iyo walaac ka muujiyey isqabqabsiga siyaasadeed ee hogaanka sare Galmudug ka soo ifbaxday, ayagoo ku taliyey in maamulka la heshiisiiyo, muujiyena in aysan aqbali karin qalalaase siyaasadeed oo dibadda laga soo abaabulay.
4. Kadib wada hadalo dheer oo aan la yeelay dhinacyada khilaafku u dhaxeeyo waxaan ku guuleysanay marka hore in aan isoo horfariisano hogaanka u sareeya Galmudug, iyaga oo iskaga garaabay tabashooyinkii shaqsiyadeed ee ka dhaxeeyay mudadii ay wada shaqeynayeen. 2
5. Intaas kadib, waxaan dadaal dheer ku bixinay sidii xal kama danbeys ah loogu heli lahaa is afgarawaaga ka dhashay kala aragti duwanaansho madadxa Galmudug ee dhanka maamulka iyo siyaasadda.
6. Waxaan ka codsanay labada dhinac in ay noo talo dhiibtaan, si aan xal uga wada gaarno khilaafkooda siyaasadeed iyo midka maamulba. Nasiib wanaag Madaxweyne Ahmed Ducaale Geele waa innaga ogolaaday inuu u hugaansamo talo soo jeedinta Xildhibaanada iyo wixii go’aamo ah oo ay xal u arkaan intaba. Waxaa ayaan daro noqotay in dhanka kale oo kale ah Madaxweyne ku-xigeenka, Gudoomiyaha Barlamaanka iyo ku-xigeenka labaad ay diideen in ay ogolaadaan furidda wada xaajoodka, iyaga oo ku adkeystay in ay xal u arkaan in Madaxweyne Ahmed Ducaale Geele u hugaansamo go’aankii Barlamaanka Galmudug 26 September 2017.
7. Wafdiga Xildhibaanada waxa uu dul istaagay, xaqiijiyayna in mas’uuliyiin sarsare oo katirsan Madaxtooyada Soomaaliya iyo dad u adeegaya si qaawan faragelin ugu sameeyeen duminta maamulka Galmudug. Iyaga oo soo abaabulay murashax madaxweyne oo lagu maalgeliyay hantidii qaranka, isla markaana ciidamadii qaranku ilaalinayaan, taasoo wiiqeysa kalsnoonida iyo wada shaqeynta Dowlada Federaalka iyo Dowlad Goboleedka Galmudug.
8. Waxaa inoo cadaatay in isku daygii xilka qaadista Madaxweynaha Galmudug lagu qabtay hotel u kireysan Murashaxaasi, aysana shir gudoomin Gudoomiyihii Barlamaanka iyo ku xigeenadiisii. 3
9. Waxaan xaqiijinay in maleeshiyo beeleedyo iyo hub farabadan oo ay wataan kana amar qaadan maamulka Galmudug ay hada si muuqaal xoogan leh ugu suganyihiin magaalada Cadaado taasoo sababi karta qalqal amni.
10.Waxaa inoo soo baxday markaan aragnay xaaladaha amni, bini’aadamnimo ee deegaanka ka jirta iyo xaalada siyaasadeed ee sii kala fogaaneysa maamulka Galmudug,
waxaan soo jeedinaynaa talooyinka soo socda:
VI. Beesha caalamka waxaan ugu baaqeynaa inay gargaar deg deg ah lasoo gaarto dadka abaartu halakeysay ee deegaanada Galmudug. Wabillaahi Tawfiiq.
Qarax Xoog Leh Oo Ka Dhacay Xamar Wayne.